कथा | Ratopati
कथा : डमी access_timeकात्तिक ९, २०७६
-सञ्जय गौतम मनमाया सधैँझँ आज पनि छिट्टै उठी र चिया बनाई । चिया दुईवटा कपमा हाली । कपहरू प्लेटमा राखेर वीरबहादुरलाई उठाई । एउटै सानो कोठामा भान्सा र सुत्ने विस्तारा भए पनि वीरबहादुर, मनमाया उठेर चिया बनाएको थाहै पाउँदैन । उसले उठेर कप समाउँछ । चियाको चुस्की...
त्यही सम्पत्तिकी मालिक्नीको यो दुर्गति ! मबाट भयङ्कर गल्ती भयो भगवान्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् ! access_timeअसोज २८, २०७६
बुढ्याइँ प्रायः बालापनको पुनरागमन जस्तै हो । बुढी काकी पनि अहिले झण्डै अबोध बालक जस्तै अवस्थामा थिइन् । उनमा जिभ्राको स्वादबाहेक अरु चेष्टा खास बाँकी थिएन । आफ्ना कष्टतिर अरुको ध्यान तान्नका लागि रोइदिनुबाहेक अरु उपाय पनि थिएन । हात खुट्टा आँखालगायत सवै इन्द्रियले जबाफ...
कथा : पाले दाइ access_timeअसोज ४, २०७६
-जितु खड्का बिहान साढे नौ बजे मात्र बस्नुपर्ने प्रार्थना आज बेलुका पनि बस्नुपर्ने भयो । हामी अलमल्लमा पर्यौँ । प्रार्थनामा सबै विद्यार्थीहरू आआफ्ना कक्षाअनुसार लहरै मिल्दै आउँथ्यौँ । मिलेर बस्यौँ तर स्कुलमा पाइला टेकेपछि गेटनजिकै टक्क उभिएर हामीलाई स्वागत गर्ने पाले दाइ आ...